UGeorg Büchner wayekho izinto ezininzi, kodwa uyaziwa kakhulu kumdlalo wakhe onjengeDanton's Tod (ukufa kukaDanton), uLeonce noLena noWezeck. Ubomi bakhe obutshwana obuyiminyaka engama-23 kuphela, wakwazi ukubhala iidrama ezisezantsi zehlabathi, ezenza iyeza, zenze uphando kwizendalo zendalo, kwaye yayingu-revolutionary.
EJamani, ubonakala njengomnye wabalobi abaluleke kakhulu besiya kuthiwa "iVormärz" (ngaphambi koMatshi), ixesha elidlulileyo elibhekiselele kwiminyaka phambi kwe-1848 revolution.
Omnye ummangaliso ngokukhawuleza, oko wayenokuba nguye, ukuba akafanga eneminyaka engama-23.
UGeorg Büchner wazalwa ngowe-1813 kwi-Grand Duchy yaseHesse. Ekuqaleni kwekhulu le-19, iJamani yayisahlukaniswe kwizikumkani ezininzi ezizimeleyo kunye nezidumbu. Iminyaka embalwa ngaphambili, uNapoleon wayekwazi ukuyisa yonke iYurophu. AmaJamani antshatyalaliswayo aphethwe yintshaba kodwa imbewu yezobuzwe kunye nokuguqulwa kwemvelo yayitshalwe ngokubanzi emhlabathini. Njengoko iNapoleon yalahlekelwa yimfazwe yakhe yokwandisa iRashiya, imimoya yobuzwe yasuka kwimimandla yaseJamani. Ubukhosi bakhe baqala ukuwa kwaye iJamani yabona ukuqala kwexesha elide lokuguqulwa kwe-1848. Yiyo le minyaka yobuguquko uGeorg Büchner azalwe kuyo-nangona isakhiwo sentlalo kwi-Grand Duchy yaseHesse yayinobungqina obukhulu kunye nobukhosi.
Wayeyilwe ngemfundo yakhe yobuntu kwaye yalandelwa ezinyathelweni zikayise ukuba abe ngugqirha.
Ngethuba lokufunda kwakhe eStrasbourg naseGiessen, waba nexhala ngakumbi ngenkululeko yezopolitiko kunye nemibono yakhe ngokugqithiseleyo.
Ngethuba efunda eStrasbourg, wayezifihla ngasese uWilhelmine Jaeglé, owahlala ngumyeni wakhe kwaze kwaba sekufeni kwakhe ngo-1937.
E-Giessen, wasungula uluntu olufihlakeleyo onenjongo yokugqitywa kwamagunya ekugqibeleni.
UBüchner wayekholelwa ngokuqinile ukuba ukungalingani kwento kunye nobuhlwempu kwiindawo zasemaphandleni kwakuyiengxaki ezinkulu ezingenako ukulungiswa ngokuxhasa isikolo esilawulayo.
Impapasho yakhe yokuqala yokuqala ephawulekayo yiphephancwadi yezopolitiko. "I-Der Hessische Landbote (I-Hessian Courier)" yakhululwa kwaye yabhalwa ngasese ngoJulayi 31, 1934. Le ntlanzi engekho mthethweni yaqhuba isiqubulo esithi "Friede den Hütten, Krieg den Palästen! (Uxolo lwabahlaseli, iMfazwe yeMfazwe kwiPalamente!) "Kwaye yazisa abantu basekuhlaleni baseHesse ukuba imali yabo efunyenwe kakuhle yayisetyenziselwa ukuxhasa ngemali inkcazo yenkundla yaseDuchy.
Ukuthunjwa, Ukufa, kunye neMveliso ePhakamileyo
Ngenxa yezenzo zakhe zokuguqula, uGeorg Büchner kwafuneka abaleke kwi-Grand Duchy yase Hesse. Ngethuba ephantsi kophando, ngokukhawuleza wabhala umdlalo wakhe odumile "UDanton's Tod (Ukufa kukaDanton)". Ekubhaliwe okokuqala ukuze ahlawule imali yokuphunyuka kwakhe, umdlalo ngokungaphumeleli kweNguqulelo yesiFrentshi yashicilelwa okokuqala xa sele sele ibalekele eStrasbourg ngo-Matshi ka-1935, ehlawulwa ngabazali bakhe. Njengoko uBüchner engayithobeli i-subpoena, wayefunwa ngokunyanzeliswa komthetho kwaye kwafuneka aphume eHesse. Kwiinyanga ezimbalwa emva kokufika kwakhe ekuthinjweni, waguqulela imidlalo emibili nguVictor Hugo (uLucretia Borgia noMaria Tudor) kwisiJamani kwaye kamva wabhala ingxelo ethi "Lenz".
Ngeli xesha leemveliso eziphezulu kakhulu, uBüchner wachitha ixesha kwi-science yophando. Wayecwaninga inkqubo yesantya ye-Common Barbel kunye nezinye iintlanzi waza wabhala ngokubhaliweyo ngesihloko. Kamva wamukelwa kwi "Gesellschaft für Naturwissenschaft (Society of Natural Sciences)" eStrasbourg. Ngesiqingatha sokuqala sika-1936, wadala "uLeonce noLena". Wabhala ingqungquthela yenkcaso yombhalo kodwa wayengekho umhla wokugqibela. Umdlalo wabuya ungafundiwe kwaye empeleni wawuqalwa ngaphezu kweminyaka engama-60 emva kokudalwa kwayo.
Kamva ngaloo nyaka, uBüchner wathuthela eZurich apho wanikwa khona udokotela kwifilosofi waza waba ngumfundisi we-yunivesithi. Wafundisa i-fishfish kunye neefom zobomi be-amphibious. Wayeqalise umdlalo wakhe odumileyo, "u-Woyzeck", eStrasbourg.
UBüchner waletha lo mbhalo kunye naye eZurich kodwa akazange agqibe umsebenzi wakhe. Ekuqaleni kowe-1937, wagula nge-typhoid fever waza wafa ngoFebruwari 19.
Zonke iidrama zakhe zisadlalwa kwiivenesi zaseJamani. Umsebenzi wakhe waphefumlela abaculi nabadlali abaninzi. Ibhaso ebhaliweyo yeJamani ibhalwe ngokuba nguGeorg Büchner.
Isikolo samanzi eSipanishi
Bhiyozela Zonke Iintsuku Ezilishumi elinesibini zeKrismesi
Imifanekiso yeSamurai, iMarriors yaseYapan
Inorganic Chemistry Inkcazo kunye nesingeniso
I-Pentagram iTarot Spread